မိခင် / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အဆိုပါမျက်ရည်ပြွန် "သော့ဖွင့်" အဖြစ်? သငျသညျဆေးကုသမှုလိုအပ်သည့်အခါ? မွေးကင်းစတစ်ဘုံရောဂါ, များသောအားဖြင့်တစ်ဦးပိတ်ဆို့မျက်ရည်ပြွန်နှင့်ဆက်နွယ်သော - မျက်စိကနေဆရာဝန်တစ်ဦး discharge ကြည့်ဖို့အခါ။ ခွဲခြာနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်
မူကြိုကျောင်းသားများအဘို့အ Daily သတင်းစာအားကစားလေ့ကျင့်ခန်း: ကောင်းမကောင်း
တစ်မူကြိုသူငယ်၏အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - အားကစားလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုမူကြိုကျောင်းသားများ Cons အားကစားဝန်များအတွက်အားကစားဝန်၏အားသာချက်များ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အဆောက်အဦးအပြင်ဂိမ်းများ, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတန်ဖိုးရှိမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်း။ ပြည်နယ်တစ်ခုကိုပေးအပ်
Underrated အန္တရာယ်: stillbirth ကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဆီးချိုရောဂါရန်
အမြိုးသမီးမြားကိုအမြဲအန္တရာယ်များကိုယ်ဝန်ဆီးချိုရောဂါများကပိုဆိုးနေကြသည်ဘယ်အရာကိုလိုအပ်သောစာမေးပွဲမလွန်သလဲ? အမျိုးသမီးများသာလျှင် 74% အရေးကြီးသောအကြံပြုချက်များတချို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဆီးချိုရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုကျင်းပ? ဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်အဘို့စမ်းသပ်ရုရှားနိုင်ငံအခမဲ့
ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပျိုဖော်ဝင်စရဲ့အစမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘယ်အားကစားဆေးပညာ says: ဘယ်လိုမကြာခဏနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအားကစားကစားရန်အင်္ဂါရပ်များဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သက်ရှိ။ ပျမ်းမျှအားတွင်, ထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲကာလမှ 11-12 နှင့် 17-19 ကနေကြာ
ကလေးတွေရဲ့ဝမ်းချုပ်တာကဘယ်လောက်ပါလဲ။ အဘယ်လက္ခဏာများကနာတာရှည်ဝမ်းချုပ်တာကိုညွှန်ပြသလဲ။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောရောဂါဖြစ်နိုင်သလား။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဘယ်လိုကုသမလဲ ကလေးကိုအစာစားပြီးလျှင်သေးငယ်သောအပင်တစ်ပင်ထဲစိုက်ရန်မည်မျှအသုံးဝင်သနည်း။ အာဟာရသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါသနည်း။ ချုပ်နှောင်ခြင်း -
ရှေးကာလ၌ကလေးမွေးဖွားအကြောင်းကို7ဆိုးဖြစ်ရပ်မှန်များ
မွေးဖွားလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမွေးဖွားပေးခြင်းများအတွက်ချထားပါ? ဗော့ဒ်ကာနှင့် noblewoman - - ကော်ဖီမွေးကင်းစ colostrum ဖို့ဦးခေါင်းခွံ၏အရိုးတို့သ set ကလေးဝမ်းသားဖွားဆရာမအနာကိုစညျးရက်သတ္တပတ်6မှထိုသူငယ်ကိုလျှော်မရေချိုးအတွက်မွေးကင်းစစောင့်ရှောက်မှု Park ကမွေးပြီးစွန့်ပစ်သည်တောင်သူလယ်သမားအမျိုးသမီးတွေပေးခဲ့
အဘယ်ကြောင့်ကလေးငယ်ငိုကြွေးသနည်း အဘယ်ကြောင့်ကြာမြင့်စွာအော်ဟစ်သောအသံကိုအန္တရာယ်သီဆိုကလေးများကလေးများငြိမ်သက်နိုင်ပါတယ်ငိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အတော်များများက "အကြံဉာဏ်ကောင်း"? 70 နှစ်အတွင်းကလေးအထူးကုမိဘများအထီးထီးနေခြင်းအတွက်ငိုသူတို့သားသမီးစွန့်ခွာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများပြောင်းပြန်ပြခဲ့ကြ
12... 11 နောက်တစ်နေ့ →